पञ्चेश्वर परियोजना नेपाल–भारतका लागि ‘गेमचेन्जर’ परियोजना हुन्छ- प्रधानमन्त्री मोदी — Sanchar Kendra
पञ्चेश्वर परियोजना नेपाल–भारतका लागि ‘गेमचेन्जर’ परियोजना हुन्छ- प्रधानमन्त्री मोदी
काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत र नेपालबीच सम्बन्ध बलियो बनाउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठुलो भूमिकाले रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको प्रधानमन्त्रीको रूपमा यो पाँचौँ भारत भ्रमण रहेको बताउँदै उनले यो भ्रमणले दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई झन् बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल र भारतबीच फरकखालको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल–भारतबीच आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सबै खालको सम्बन्ध रहेको बताए ।
नेपालको शान्ति, प्रगति र विकासका लागि भारत हरहमेसा साथमा रहेको बताउँदै उनले नेपालको विकासका लागि भारत हरहमेसा साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग विभिन्न विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले दुई देशको बीचमा भइरहेको विभिन्न कामको समीक्षा भएको बताए । उनले विद्युत् क्षेत्रमा पनि दुई देशको बीचमा सहयोग आदान प्रदान हुने जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘नेपालले आफ्नो विद्युत् भारतलाई निर्यात गरिरहेको छ, यसले दुवै देशलाई फाइला भइरहेको छ ।’ उनले विद्युत् निर्यातले नेपाललाई आर्थिक रूपले फाइदा हुने धारणा राखे ।
पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल भएको बताउँदै उनले यो परियोजना नेपाल भारतका लागि ‘गेमचेन्जर’ परियोजना हुने दावी गरे ।
क्रस बोर्डर कनेक्टीभिडीको बारेमा पनि दुई देशको प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री मोदीले जयनगर–कुर्था रेल सेवा पनि त्यसैको एउटा सुरुवात रहेको बताए ।
झन्डै २० करोड रुपैयाँ जरिबाना माग गरेर ५ जनाविरुद्ध मुद्दा, ‘भीसीटीएसका कागजात २८ पटकसम्म परिवर्तन गरे’
काठमाडौँका मतदाताले किन पत्याएनन् विवेकशील साझा पार्टीलाई ?
जजिराको जहाज गौतमवुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्दा चरासँग ठोक्किएको आशंका
भरतपुर अपडेट : दाहालले ३६ हजार ५३० मत पाउँदा सुवेदी लाई कति मत् ?
रंगेलीमा बढी मत भेटिएपछि तनाव, प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार